Kursiga Cabdiraxmaan Saylici Noqonwaa Mid Xaqa Gadabuursi Ku Lumo:
Waxaa inoo cadaatay in dhibaatooyika siyaasadeed ee ina soo gaadhay iyo sadbursiga beesha dhexe sobobteeda ay lahaayeen siyaasiintii Gadabuursi ee safka hore ku jiray taniyo intii Somaliland la aas-aasay. Waxaa inoo cadaatay in marka danta guud la weeraro inaan leenahay Salaadiin garaad iyo karti Ilaahay ku manaystay. Halka sartu ka qudhmaysay waxay ahayd dhinaca siyaasiintii hore oo awoodi waayay inay kaashadaan salaadiinta marka la soo qaado arrin khusaysa danta guud iyo aayaha. Cabdiraxmaan Saylici maanta ta ka suurtoowday waa tii horey uga suurtoobi wayday Rayaale oo jagada ugu saraysa dalka ka qabtay. Matalan maalintii kuraasta golaha wakiilada la qaybsanaayay Rayaale isagaa wax maaraynaayay. Suldaan Sheekh Muuse oo Rayaale aad ay iskugu dhawaayeen ayaa kula taliyay inuuna tolka 13 kursi u qaadin, diidana inuu saamigaa quudhsiga ah gacantiisa ku saxeexo. Rayaale ma dhagaysan Sheekh Muuse. Waa arrintii keentay inuu Sheekh Muuse go’iisa ka qaato Rayaale agtiisa. Maalintaas jabkii u weynaa ee siyaasadeed ayaa Gadabuursi gaadhay. Hadduu Rayaale sida Sheekh Muse kula taliyay yeeli lahaa amba sida maanta Cabdiraxmaan Saylici yeelay ka suurtoobi lahayd, waxaa dhici lahayd in arrintu ku soo wereegi lahayd madaxdhaqameedka Gadabuursi oo siday maanta u hadleen iyo si ka daran u hadli lahaa, ileen waliba Sheekh Muusoo garta macalin ku ahaa iyaa noolaaye. Xasuusnaadana in dhibta Saylac gacanteena aan ku samaynay markuu Rayaale Salal gacanta u gashay reerka maanta cabanaaya. Tii Saylac dhamaatee, tii Gabiley ee Rayaale reer kaliya u salaxay iyaa xalkeedu weli hadhsan yahay iyo miinooyin tiro badan oo weli aasan.